मुकुन्देले गरे पहिलोपटक यस्तो सत्य कुरा! के अब मुकुन्दे सच्चिएकै हुन् त? – PathivaraOnline
Home > समाज > मुकुन्देले गरे पहिलोपटक यस्तो सत्य कुरा! के अब मुकुन्दे सच्चिएकै हुन् त?
मुकुन्देले गरे पहिलोपटक यस्तो सत्य कुरा! के अब मुकुन्दे सच्चिएकै हुन् त?
admin January 29, 2019 समाज 0
काठमाडौ । सामाजिक संजालमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सधै बिबादमा आइरहने मुकुन्दे नामले परिचित मुकुन्द घिमिरेलाई नचिन्ने सायादै कोइ छैनन होला । सामाजिक संजालमा सबै भन्दा धेरै गाली खाने मध्य मुकुन्दे पनि एक हुन । धेरै भन्दा धेरैले उनलाइ पागल भन्छन भने उनलाइ नजिक बाट चिन्ने केहीले भने उनलाइ समर्थन गर्छन । सधै बिबादास्पद टिप्पणी गरेर गाली खाने मुकुन्देले गरेको एक टुइट भने सबैको चित्त बुझ्दो छ केही ले त मुकुन्देले सहि कुरा गर्यो भन्दै शेयर गरिरहेका छन
उनको टुइट जस्ताको तस्तै:-
निर्मलाको बलात्कारी सबैले चिनेको छ, तर कारबाही हुँदैन, मदन भण्डारीको हत्यारो सबैले चिनेका छन्, तर पीडित परिवारले बोल्न पनि मिल्दैन, राजारानी मार्ने पनि यही हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर टुहुरा जनताले चुँ बोल्नु पनि खतरनाक हुन्छ, यहाँ गणतन्त्र राजैराजा भएको फेसबुकमा मात्रै आएको हो।
— Mukunda Ghimire (@Mukunda_dai) January 27, 2019
पैसा कमाएर पनि बचाउन सक्नु भएकाे छैन? त्यसो भए यसो गर्नुस्
भेटियो पाथिभरा माताको साक्षात पाइला, पत्याउनै गारो हुने अनौठो रहस्य! (भिडियोसहित)
रुपैया दिन्छु ‘न’ग्न तस्बिरको’ भनेपछि युवतीले खिचेर पठाइन यस्तो फोटो